Frantsa miady amin'ny orana asidra avy amin'ny fipoahan'ny nosy Canary
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Frantsa miady amin'ny orana asidra avy amin'ny fipoahan'ny nosy Canary
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Resorts • Safety • Vaovao Mafana Espaniola • News sustainability • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fipoahan'ny volokano hita tao amin'ny Valan-javaboary Cumbre Vieja ny alahady dia nanery ny mponina 6,000 tao amin'ny nosy La Palma handao ny tranony. Araka ny fanavaozam-baovao avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Fitantanana Vonjy Voina any Copernicus tamin'ny Alakamisy dia trano 350 no rava, miaraka amin'ny velarantanin'ny lava mihoatra ny 166 hektara.
Dioxide solifara dia namboarina hamakivaky an'i Frantsa sy ny faritr'i Mediteraneana amin'ity faran'ny herinandro ity.
Ny haavon'ny rahona dioksida solifara indrindra dia hahatratra 1,000 ka hatramin'ny 3,000 metatra.
Canary Islands Volcanology Institute dia nanombana fa ny fipoahan'ny volkano Cumbre Vieja izay niteraka ny diôdôra solifara dia mety haharitra "eo anelanelan'ny 24 ka hatramin'ny 84 andro".
Keraunos, ilay tadion-drivotra frantsay ary oram-baratra mahery, dia nizara sary iray avy amin'ny programa Copernicus avy amin'ny EU izay mampiseho fa misy volafotsy diôzida solifara, vokatry ny fipoahan'ny volkano nosy Espaniola vao haingana, dia saika hamakivaky an'i Frantsa sy ny faritr'i Mediteraneana ny faran'ny herinandro ity. Ny haavon'ny rahona matevina indrindra dia hahatratra hatramin'ny 1,000 ka hatramin'ny 3,000 metatra.
Frantsa ary ny faritra ao amin'ny Ranomasina Mediterane dia vinavinaina hahatsapa ny vokatr'ilay fipoahana, satria miakatra mankany Eropa ny rahona feno diôlôida sulfur, ka mahatonga asidra somary asidra kokoa.
The Canary Islands Volcanology Institute (Involcan) dia nanombatombana fa ny fipoahan'ny volkano Cumbre Vieja izay niteraka ny dioksida solifara dia mety haharitra "eo anelanelan'ny 24 ka hatramin'ny 84 andro".
Araka ny filazan'ny manam-pahaizana, ny solifara dia mihetsika miaraka amin'ny etona misy rano any an-danitra ary manome asidra solifara, izay matetika mamorona orana asidra. Vokatr'izany, ny rotsakorana amin'ny andro ho avy dia ho asidra kokoa noho ny mahazatra any amin'ireo faritra voadona.
Ny dioxide solifara dia mety hisy fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny olombelona, ​​ka miteraka fahasosorana amin'ny havokavoka sy ny maso. Ny olona kosa dia nitatitra fa tsy ho mafy ny fisehoan-javatra satria niparitaka tsara ireo sombiny.
The fipoahan'ny volokano miorina ao amin'ny Cumbre Vieja National Park ny alahady dia nanery ny mponina 6,000 tao amin'ny nosy La Palma handao ny tranony. Araka ny fanavaozam-baovao avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Fitantanana Vonjy Voina any Copernicus tamin'ny Alakamisy dia trano 350 no rava, miaraka amin'ny velarantanin'ny lava mihoatra ny 166 hektara.
Nipoaka tampoka ny volkano vaovao tamin'ny alatsinainy teo ny Nosy Canary Espaniola taorian'ny horohoron-tany 4.1 dia voasoratra anarana, namokatra lava bebe kokoa ary nahatonga ny nosy 500 hamindra toerana. Ny mpamono afo dia niasa nampifandray ny fikorianan'ny volkano lavitra ny ranomasina satria ny fifandraisan'ny lava sy ny ranomasina dia mety hiteraka setroka misy poizina.